War Saxaafadeed: Hadalka Madaxweynaha ee uu kaga hadlay tirada Askarta Kenyanka ee la dilay oo si qaldan loo fasirtay | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
War Saxaafadeed: Hadalka Madaxweynaha ee uu kaga hadlay tirada Askarta Kenyanka ee la dilay oo si qaldan loo fasirtay
War saxaafadeedka ayaa lagu bilaabay inay Warbaahinta si qaldan u fasirteen hadal ay ka soo xigteen Madaxweyne Xasan Sheekh oo uu kaga hadlay tirada Askartii Kenyaanka ee ay dhibaatooyinka ka soo gaareen Weerarkii Ceel-cadde lagu qaaday bartamihii bishii hore.
Tiradda u dhexeysa 180 ilaa 200 Askari ee uu Madaxweynaha ku xusay Wareysiga uu siiyey Telefishin Maxali ah ugalama jeedin in tiradaasi tahay midda saxda ee dhimashadda soo gaartay Askarta Kenyanka ee lagu weeraray Ceel-cadde, balse waxa uu Madaxweynaha caddaynayey cabirka Xeradda iyo Tirada Askarta uu u maleeyey inay ku sugnaayeen Xeradda Ceel-cadde, markii lagu qaaday Weerarka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuue waxa uu ka mid ahaa Hoggaamiyayaal kala qeyb galay Kenyaanka Baroordiiqda loo sameeyey Askarta Geesiyiinta ee la dilay, taasi oo lagu qabtay Dedmadda Eldoret dabayaaqadii bishii Janaayo ee la soo dhaafay.
Madaxweynuhu waxa uu Wareysiga uu siiyey Telefishinka Soomaaliga ku difacay Go’aankiisa uu kaga qeyb galay Baroordiiqa loo sameeyey Ciiddanka Kenya.
War-saxaafadaeedka waxaa lagu soo gebagebeeyey in Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dadka Soomaaliyeed ka go’an tahay inay taageero buuxda u muujiyaan Walaalahooda Kenyanka ee qeybta ka ah Hawlgalka Nabad-ilaalinta AMISOM iyo inay la wadaagaan xanuunka khasaarihii ka dhashay muddadii uu socday weerarkii ka dhacay Xeradda Ceel-cadde.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Madaxtooyadda ayaa ku soo beegmay, maalmo kadib, markii ay Milliteriga Kenya gaashaanka ku dhufteen hadal uu Madaxweyne Xasan Sheekh laga soo xigtay inuu yiri: “180 ilaa 200 Askari ayaa Kenya looga dilay weerarkii ay Alshabaab ku qaadeen Xeradda Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Afhayeenka Ciiddanka Kenya, Kolonel David Obonyo ayaa ka biyo diiday hadalkaasi, wuxuuna sheegay inaysan Dowladiisa weli shaacinin tirada rasmiga ee Askarta looga dilay Ceel-cadde.
Xarakadda Alshabaab ayaa horey u sheegatay inay weerarkii Ceel-Cadde ku dileen 100-Askari oo Kenyan ah, kuna qafaasheen tiro kale.
Si kastaba ha ahaatee, Weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu Ciiddanka Kenya ka soo gaaray khasaarihii ugu xumaa tan iyo markii ay Ciiddankooda soo galeen gudaha Somalia bishii October 16-dii ee sannadkii 2011-kii.
Previous: Madaxweynayaasha Somalia iyo Jabuuti oo Kulmay.
Next: 3 children among five Somali nationals dead in apartment fire